Sababta Cabdi iley Maxkamada Gaarka ah loo Gaynayo maanta. | ogaden24
Sababta Cabdi iley Maxkamada Gaarka ah loo Gaynayo maanta.
Nov 9, 2018 - Aragtiyood
Madaxwaynihii Hore ee dawlada degaanka Somaalida Cabdi Maxamud Cumar ayaa maanta la Horgaynayaa maxkamad Gaara oo dhagaysanaysa Eedaymaha loo Haysto.
Dhagaysiga Kiiska Cabdi oo maalinimadii shalay ahayd ku beegnaa ayay maxkamadii Horay Kiiskiisa u Gacanta ugu Haysay Amartay in xabsiga lagu sii Hayo sifo aan Lacadayn, taasi oo shaki Galinaysa madax-banaanida maxkamada iyo Helitaanka Hanaan cadaaladeed oo lagu Kalsoonaan karo.
Hadaba Xidhiidho kala duwan oo Warbaahinta madaxa banaan ee Ogaden24 ay lasamaysay ilo kala duwan oo Qaar-kood Goob Joog u ahaayeen dib u celintii Cabdi iley dib loogu celiyay xabsiga, ayaa cadeeyay in maanta Kiiska Cabdi lagu dhagaysan doono maxkamad Gaara oo aan ilaa iyo Hada Lacadayn.
Sida Xogtu sheegayso waxaa maxkamadan Gaarka ah lagu wadaa in lahorkeeno shakhsiyaad ku markhaati furi doono Cabdi iley, kuwaasi oo magalada Jigjiga si yaabo kala duwan looga Qaaday 3-dii maalmood ee ugu dambaysay hadana kusugan Goobo Gaara oo magalada Addis ababa ah.
Dhagaysiga Eedaymaha Cabdi iley ee maanta ayaa waxaa kaqayb Galaya Xeer ilaalinta iyo wasaarada cadaalada xubno kasocda, taasi oo u muuqata in dhagaysiga maantu uu Yahay mid dano Gaara oo siyaasadeed laga leeyahay.
Waxaa Jiro xog sheegaysa in kadib dhagaysiga Kiiska maanta ee Markhaatiyaasha Wataa dib loo dhigi doono dhagaysiga xiga mudo 14-cisha ah, iyada oo kadib mudadaasi Labada Todobaad ahna dib loogu celin doono madaxwaynihii Hore ee DDS maxkamada sare ee Itobiya oo ah Tii Horay Gal-dacwadeedkiisa Gacanta ugu Haysay ahna mida xaqa u leh inay Kiiska ka Go’aan Gaadho.
Si kastaba Ha ahaatee waxay noqonaysaa markii 4-aad ee madaxii Hore ee mamulka la Horkeeno maxkamad balse maxkamadaynta maanta ayaa ah mid siwayn ugu duwan dhagaysiga 4-tii maalmood ee Hore.
Daawo:Safarkii madaxwaynaha Jubbaland iyo soo dhowayn Heer sare ah.
Dawlada Federalka ah ee Muqdisho ayaa si Heer sare ah usoo dhowaysay madaxwaynaha Jubbaland ...
Xisbiga mucaaradka Tigray ee Arena oo dagaal ugu Hanjabay Itobiya.
Qomiyada Tigreega ayaa mar kale muujisay mucaarad iyo muxaafad ba inay diyaar u Yihiin ...
Hogaanka A. dibada ONLF oo Wardheer u celiyay Ciid uu sanada badan kala maqnaa+ sawiro.
Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee JWXO ahna Hogaanka Arimaha dibada mudane Axmedyaasiin Sh. Ibraahim ayaa ...
Daawo: Xamze Warfaa oo kamid Noqday Golaha wasiirada State-ka Minnesota.
Xukumadda Gobolka Minnesota ayaa u magacawday Hamsa Warfaa oo ka mida Soomaalida Minnesota dagan ...
Xadhiga dhibane Khadar Jigre Waa Halis ruux kaste oo DDS ah sugaysa.
Waa Khalad iyo Gaf sharci in dowladdu Tallaabbo ka qaaddo muwaaddin Aan dambi Faraha ...